I-Hotot: Iklayenti ledeskithophu le-Identica, Twitter ne-StatusNet | Kusuka kuLinux
I-Hotot: Iklayenti ledeskithophu le-Identica, Twitter ne-StatusNet
Sisanda kusetha kunethiwekhi yethu yendawo insizakalo ye- I-Microblog usebenzisa IsimoNet, ipulatifomu efanayo esetshenziswa Identi.ca.
Ngokusobala, lolu hlobo lwensizakalo lukhululeke ukuphatha ngohlelo lokusebenza lwedeskithophu, ngakho-ke ngangiqala ukuthola eyodwa ezofanelana nezidingo zami. Yiziphi izidingo okwakufanele zihlangabezane nazo?
Bekufanele kube uhlelo lokusebenza olulula nolusebenziseka kalula.
Bekufanele ngikhuthazelele ukusetshenziswa kwe- Ama-proxies nokwenza ngokwezifiso iseva okufanele ngixhume kuyo.
Ngizamile nge Gwibber, Pino, I-Turpial y I-Pidgin. Kuzo zonke, ukuphela kwento ebingangivumeli ukuthi ngifake iseva yangokwezifiso yokuxhuma kuyo bekuyi- I-Turpial. Pino kube lula kakhulu, Gwibber ilayishwe kakhulu futhi I-Pidgin Bengingathandi ukwenza engikudingayo.
Ngakho-ke ngagcina I-Hotot. Lolu hlelo lokusebenza lunokusekelwa kwe- Twitter e Identi.ca ngokuzenzakalela, kepha ezinye izinsizakalo zalolu hlobo nazo zingenziwa ngezifiso. I-interface, njengoba ubona esithombeni, ilula futhi imnandi, ngaphezu kokuba nemiphumela emihle kakhulu lapho ubuka umugqa wesikhathi, ama-tweets amasha noma imininingwane yomsebenzisi.
Inezaziso ezihlanganiswe ohlelweni, ukusekelwa kwezandiso (kufaka phakathi i-firewall ebhekiswe kubasebenzisi) kanye nethuba lokulayisha izithombe uma insiza ikuvumela, isifinyezi se-URL, umhumushi wolimi, I-Gmap, phakathi kokunye. Iphinde isivumele ukuphatha ama-akhawunti amaningi.
Ukungafaki lutho olulula njengokuvula i-terminal nokubeka:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Hotot: Iklayenti ledeskithophu le-Identica, Twitter ne-StatusNet
Kuhle kakhulu futhi wapisimo leli klayenti le-twitter, ngiyasithanda isikhombimsebenzisi sayo. Elula futhi enamandla.
Enye yezintandokazi zami, kodwa kuqala u-Choqok 🙂
Kunengqondo uma ungumsebenzisi we-KDE, akunjalo?
Iklayenti lami le-Linux engilithandayo futhi ngiyaxolisa kuSatanas (owenze iTurpial) ngokukukhohlisa ngale ndlela, kepha thanda nje. Yize inguqulo yakamuva inezinkinga ezithile nge-API.
Iyiphi inkinga ngqo? Njalo angidonsele iphosta elinephutha lokuxhuma elingu-500. Ngakho-ke manje ngisebenzisa iTurpial engaphezulu.
Ingitshele ukuthi i-API ibisivele iphelile futhi injalo, ngicabanga ukuthi bekuyiphutha elingu-500 kepha lokho bekungilungisele lapho ngiyibuyekeza ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Kukhona inguqulo entsha.
Hmm. Ngiyayilinda ke ku-Debian yami, yize ngijabule nge-Turpial 😀
Iyiphi inguqulo ye-hotot oyifakile?
Angisebenzisi iHotot, kepha iTurpial, kepha inguqulo enginayo yile: 1: 0.9.7 + git20111028.00039ca-1
Ithiphu: ungayisusa kanjani imishwana efana ne- "fortune cookie" lapho uqala i-terminal
I-Liferea: Isifundi se-RSS esivumelana ne-Google Reader